M. Farmaajo oo lacagtiisa indho fiiqis ugu sameeyay 100 qof lana kulmay bulshada rayidka (Sawiro) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta M. Farmaajo oo lacagtiisa indho fiiqis ugu sameeyay 100 qof lana kulmay...
M. Farmaajo oo lacagtiisa indho fiiqis ugu sameeyay 100 qof lana kulmay bulshada rayidka (Sawiro)
Madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo oo la kulmay madaxda bulshada rayidka. Asniin, 25. Sep. 2017/ Mogadishu, Soomaaliya( SONNA)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan talo-wadaag ah la qaatay qaar kamid ah Ururrada Bulshada Rayidka ah ee dalka.
Ilaa 100 qof oo danyar ah oo kunool magaalada Muqdisho ayaa ka faa’idaystay mashruuc indho fiiqis ah oo uu maalgeliyay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo kana bixiyay mushaarkiisa.
“Sida aad ogtihiin Madaxweynaha Jamhuuriyadad Federaalka Soomaaliya wuxuu ku yimid rabitaanka shacabka iyo in uu balanqaaday in uu wax u qabto. Sida aad la socotaan waxaa socda maalmahan barnaamijyo isdaba joog ah oo bulshada lagu horumarinayo, waxaa kamid ah tan oo jeebkiisa uu ka bixiyay lacagtan lagu daaweeyo dadkani oo aragga la’aa in muddo ah” ayuu yiri C/qaadir Macalin Nuur, Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Soomaaliaya .
Qaar kamid ah dadkii ka faa’idaystay mashruucani ayaa uga mahadnaqay madaxweynaha oo uu mushaarkiisa ka bixiyay lacagta indhaha loogu fiiqay.
Previous articleSomaliland oo beenisay in garoonka diyaaradaha Hargaysa lagu xanibtay M. Galmudug
Next articleRa’iisul wasaaraha oo Washington kula kulmay Sarkaalka ugu Sarreeya fulinta Bangiga Adduunka (Sawiro)